Ugu yaraan afar qof oo ku dhimatay shilal baabuur oo ka dhacay wadada u dhaxaysa Garoowe iyo Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandUgu yaraan afar qof oo ku dhimatay shilal baabuur oo ka dhacay wadada u dhaxaysa Garoowe iyo Boosaaso
May 24, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Wadada laamiga ah ee u dhaxaysa Garoowe iyo Boosaaso. [Sawirka: Puntland Mirror]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ugu yaraan afar qof ayaa ku dhimatay 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen shilal baabuur oo ka dhacay wadada laamiga ah ee u dhaxaysa magaalooyinka Garoowe iyo Boosaaso.
Shilalka ayaa dhacay gelinkii dambe shalay oo Talaado ahayd, baabuurta shilka gashay ayaa ahaa Noah Toyota kuwaas oo siday rakaab ka yimid magaalada Boosaaso, sida ilo-wareedyadu ay u sheegeen warsidaha Puntland Mirror.
Shilalka ayaa ka dhacay meel u dhow degmada Dangorayo ee gobolka Nugaal.
Dadkii ku dhaawacmay shilalka ayaa loo soo gudbiyay isbitaalka guud ee magaalada Garoowe.
February 19, 2017 Ciidamada haayada NISA oo gacanta ku dhigay koox gaari wadatay oo dilal shalay ka geysatay gudaha Muqdisho
July 24, 2016 Ciidanka nabadsugida dowlada federaalka Soomaaliya oo Muqdisho ku qabtay gaari ay saarnaayeen walxaha qarxa
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada ammaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ee NISA ayaa qabtay xubin katirsan maleeshiyada Al-Shabab kadib howlgal ka dhacay Muqdisho. “Howlgal ciidanka nabadgalyadu ka fuliyay Muqdisho 2da Sabtembar 2018, ayaa lagu qabtay xubin Al-Shabaab ah [...]
Minneapolis-(Puntland Mirror) Ilhaan Cumar ayaa mar kale sameysay taariikh cusub. Hadda waxay noqon qofkii ugu horeeyay ee Somali-Mareykan ah oo loo doorto aqalka Congress. Ilhaan oo ka socota xisbiga Dimuqrraadiga ayaa ka adkaatay Jennifer Zielinski [...]